China Umxholo kunye nokubaluleka kwegama lemizi mveliso | Umenzi we-WEIHUA kunye noMthengisi | Weihua
I-Hard disk shell + inkxaso yekhompyuter
i-alum plate (isitya sobhedu) + phrinta + isitampu
I-alum plate + isitampu + seenkozo ze-CD + anodizing
I-alum + yepeyinti ebandayo + yokupeyinta (anodize) + iinkozo
Icandelo lokuprinta lePET le-PET
insimbi + yobhedu + etching + ukupeyinta + electroforming
Ukunyathela isitampu (Precision CNC)
I-Alum + CNC + Anodised
I-Alum + Lathe + CNC + Anodised
IAlum + eyenziwe yaqokelelwa + i-cnc + Anodised
UkuLungiselela okokuKhetha + ukuPhathwa kwePVD + ukutshiza
Ulwazi lweAluminiyam eyandisiweyo
Inkqubo yoyilo yeNameplate
Umxholo kunye nokubaluleka kwegama lemizi mveliso | WEIHUA
Umzi ngokubanzi ubhekisa kwileyibhile emiselweyo kwimveliso emva kokuba imveliso ibekwe kwimarike, enika abasebenzisi ulwazi olufana nokuchongwa kophawu lwentengiso lomenzi, umahluko wophawu, kunye nokukhumbula ipharamitha yemveliso.
Isakhiwo segama lemizi mveliso sisetyenziselwa ukurekhoda idatha yezobuchwephesha yomenzi kunye neemeko zokusebenza ezilinganisiweyo, ukuze zisetyenziswe ngokuchanekileyo ngaphandle kokonakalisa izixhobo.
Izinto zokwenza amagama eefektri zeshishini ziziphathamandla iiplates zensimbiezingezizo zesinyithi: iipleyiti zentsimbi zibandakanya i-zinc alloy, ubhedu, isinyithi, i-aluminium, intsimbi engenasici, njl. -umgangatho, owomeleleyo, kunye nomhlwa-ongenanto.iiplastiki zentsimbi, i-acrylic organic board, i-PVC, i-PC, iphepha, njalo njalo.
Ukusetyenziswa kweemveliso zombane kunye nezixhobo, iiflethi zeefektri zineenkcukacha zemveliso ngokubanzi kunye neemfuno ezizodwa zobugcisa.
Yintoni equlethwe yipleyiti yesinyithi yoshishino?
1. Igama leplate kufuneka liphelele kwaye licace, kwaye akufuneki kubekho imivumbo engekhoyo. Umda weplate yeplate ugudile kwaye awunangqameko;
2. Igama leplate kufuneka liqulathe ulwazi olufana negama lemveliso, imodeli, iiparameter zombane, iiparameter, uphawu, inombolo yesatifikethi, umhla wokuhanjiswa, inombolo yesatifikethi kunye nomenzi wayo;
3. Ingcaciso eyimfuneko yesilumkiso iya kunikwa kwipleyiti enegama, enje ngala "Akuvunyelwa ngokungqongqo ukuvula isiciko ngombane", "Ukutshaja nokukhupha kwindawo yokubonelela ngoqhushumbo", njl.
Amacwecwe amagama eemizi-mveliso ayimfuneko kolu lwazi lulandelayo
1. I-logo Ivumela abasebenzisi kunye nabafakeli ukuba baqonde ngokukhawuleza uhlobo lwemveliso, igesi / uthuli oluhambelanayo kunye namaqela obushushu.
Inombolo yesatifikethi Isatifikethi esinokubonisa imveliso siyinyani kwaye siyasebenza, thintela ukukhetha imveliso engeyonyani kunye nephantsi.
Umhla wefektri.Singabazi ubomi benkonzo yemveliso ngokukhawuleza, kwaye sigwebe ukuba sithathe indawo yebhetshi entsha yeemveliso kumjikelo wobomi.Thintela ukungaphumeleli kokusebenza ngenxa yokusetyenziswa kwexesha elide.Iqokobhe le-screw okanye umhlwa, umhlwa, ukutywina isangqa ukuguga akunakufikelela kwisiphumo sokutywina.
Imiyalezo yesilumkiso.Ingavumela ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kwabasebenzi ukunqanda ukusebenza okungafanelekanga okubangelwa ngumonakalo wezixhobo.
Ukushwankathela, igama lesinyithi leemveliso zorhwebo yileyibhile ebaluleke kakhulu, kwaye ulwazi olungaphelelanga okanye olungachanekanga luya kubangela iingxaki ezingeyomfuneko kwindawo yokusebenzisa kunye nabasebenzisi.
Ukufunda ngakumbi malunga zesinyithi, igama elicwangciswe nguwe, njl., Nceda ufowunele iTehuahua Technology. Sinento ekumgangatho ophezulu, ukusebenza ngokukuko, kunye neqela lophuhliso lobugcisa lobunjineli elinokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zakho.
Ixesha Post: Nov-14-2020
IHuizhou Weihua Technology Co, Ltd © Copyright - 2019-2021: Onke amalungelo agciniwe.
Hot Products - eKhaya - AMP Mobile cnc machining iinxalenye ngqo , ukuchaneka kuya kufa kwaye ukugxila, ngqo lizwekazi bexhentsa , ngqo kwanokwenza kunye pvt.ltd bexhentsa ,